Qorshaha dowladda uga degsan dayaca ka jira Isbitaal Martini | Dhacdo
Qorshaha dowladda uga degsan dayaca ka jira Isbitaal Martini
Toddobaadyadii ugu dambeysay waxaa si weyn loo dhaliilayay adeegga caafimaadeed, ee uu bixiyo Isbitaal Martini ee Magaalada Muqdisho, xilli isbitaalkan uu yahay kan ugu weyn ee dowladdu u asteysay in lagula tacaalo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19.
Isbitaalkan ayaa waxaa tan iyo bishii February xanuunka ugu geeriyooday in ka badan 100 qof, kuwaa oo goobo kala duwan o magaalada ah laga kala keenay, markii uu xanuunka soo ritay. Ehelada dadkaasi qaarkood oo dad danyar ah waxay sheegeen in Oxygen la’aan ugu geeriyoodeen isbitaalkaasi.
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe oo wax laga weydiiyay qorshaha dowladda ugu yaal habaca ka jira Isbitaal Martini ayaa qiray in culeyska ugu weyn uu ka jiro dhanka Oxygen-ka, balse ay ku tala jiraan sidii dalka loo keeni lahaa mashiinada naqaska sameeya.
“Waxa ugu weyn ee maanta muhiimka ahi waxaa weeye Oxygen-ka, maadaama xanuunka abaarayo uu markiiba culeysiinayo neef qaadashada. Marka dadkii neeftaa ku dhageysa, xoogga waxaan saarnay sidii loo heli lahaa mashiinada neefta dhaliya ee Oxygen-ka sameeya. Hawshaasaa ku jirnaa, waxaana naga go’an maalmaha soo socda inaanu helno Oxygen ku filan isbitaalada.” Ayuu yiri Wasiirka.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaan ka dalbaneynaa dalalka dibadda, Turkiga hadda waxaa noogu maqan mashiinkii, waxaana laga yaabaa sida ugu dhakhsaha badan in loo keeno, intaasna waxaan isku sii maamuleynaa kuwa aan haysano, laakiin waxaan ku talagaleynaa xaaladda inay noqon karto xaalad adag. Haddii Ilaahay sidaa nagu dhaafiyo waa Al Xamdulillaah, laakiin ku talagal waa inuu jiraa iyo la tacaalis dadka hadda u jiifa xanuunka ee bukaanka ah.”
Wasiirka ayaa yiri “Xaaladda runtii ma qurux badna, xanuunku aad buu dadka ugu baahayaa, saamayntiisa way sii badaneysaa.” Waxa uu intaa ku daray “Waxaad mooddaa hirkaan 2aad inuu ka culus yahay, oo uu ka xun yahay kii 1aad ee na soo maray, aad buu u fidayaa, una faafayaa.”
Wasiir Dubbe oo la hadlay VOA ayaa yiri “Waxaa kala batay dadka uu xanuunka soo ridanayo iyo awoodooda dhaqaale. Qalabka Oxygen-ka aynu hayno iyo dadka uu soo ridanayo ma rabno inay kala bataan.”
Soo laba kacleynta xanuunsidaha COVID-19 ayaa si weyn u gilgilay awoodda hay’adaha caafimaadka iyo isbitaalada, gaar ahaan marka uu qofka u baahdo qalabka lagu neefsado.
Taliyihii Ciidanka Haramcad ee Galmudug oo ku dhintay dagaalka Guriceel
Taliyihii Ciidanka Haramcad ee Qaybta Galmudug, Abshir Muumin Faarax (Fanax) ayaa fiidnimadii caawa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal galabta ka...
Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Magaalada Guriceel